“Waxaan qarka u fuulay inaan ka fariisto kubadda cagta dhawaan!” – Edinson Cavani – Gool FM
(Manchester) 07 Okt 2020. Weeraryahanka dhawaangalka ah kooxda Manchester United ee reer Uruguay Edinson Cavani ayaa qirtay inuu qarka u fuulay inuu si rasmi ah uga fariisto kubada cagta dhawaanahan, sida uu qoray wargayska “The Sun” ee dalka England.
Wargeyska ayaa wuxuu tilmaamay in Edinson Cavani uu ku dhawaaday inuu dhigo kabahiisa, kaddib markii uu gacalisadiisa haleelay caabuqa Korona Fayras.
Weeraryahanka cusub ee kooxda Manchester United ee Edinson Cavani ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku shegay:
“Caafimaadka qoyskaaga ayaa ugu horreeya”.
“Dabcan waxaan ku fekeray inaan ka fariisto oo aan ka tago kubadda cagta waqtigaas”.
“Waxaan dhibtoonay intii uu socday Korona Fayras qoyskeyga iyo saaxiibteey, runtii xaalada aad ayeey u xumeyd sababa la xiriira cabsi iyo argagax, waana mahad Ilaah inaan ka soo kabanay dhaawaca oo aan joogno”.
“Runtii waxaan ku fikiray inaan ka fariisto kubadda cagta oo aan joogo dalkeyga hooyo, waxaanan u maleynayaa inay taasi caadi tahay, sababtoo ah waxaad bilaabeysaa in maskaxdaada uu walwal galo”.
“Horyaaladu mar horaba way bilaabmeen, waxaanan doonayay inaan koox yeesho ka hor inta aanu suuqu xirmin, haddana waxaan joogaa Manchester United waxaana ku faraxsanahay inaan xirto maaliyada kooxda”.
Si kastaba ha ahaatee, Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku dhammaystirtay saxiixa Weeraryahanka qibradda leh ee Edinson Cavani beeca xurta ah mudo hal xilli ciyaareed ah ilaa iyo xagaaga 2021, iyadoo ay macquul tahay in xilli kale lagu daro qandaraaska labada dhinac.